फास्ट ट्रयाक निर्माण : पैसा दिने सरकार, बाटो खन्ने ठेकेदार, बीचमा सेना – रिपोर्टर्स नेपाल
२०७५ फाल्गुन २ गते प्रकाशित, l ०७:११
काठमाडौं २ फागुन । आइतबार अपराह्न मकवानपुरको सिस्नेरीस्थित सेनाको क्याम्पभन्दा करिब एक किलोमिटर दूरीको छालाटारस्थित अनकन्टार भिर खोल्न दुई स्काभेटर सक्रिय थिए । साइट इन्चार्ज यदुवंश अधिकारी स्काभेटरचालकलाई जोगिएर काम गर्न निर्देशन दिँदै थिए । पहाड फोर्नु जोखिमपूर्ण रहेको बताउँदै उनले सुनाए, ‘हामी मोतीदान कन्स्ट्रक्सनका कर्मचारी हौँ । गत वैशाखदेखि निरन्तर पहाड फोड्दै आएका छौँ । हामीमातहत मात्रै ४० भन्दा धेरै कामदार कार्यरत छन् । उनीहरूमध्ये कोही ड्रिलिङमा संलग्न छन्, कोही स्काभेटर चलाउँछन् । काम जोखिमपूर्ण छ ।’
त्यस्तै, गजुरमुखी कन्स्ट्रक्सनका इन्जिनियर अशोककुमार मण्डलका अनुसार यो खण्डमा धेरै ठाउँमा पहाड खोप्नुपर्छ । र अधिकांशको ठेक्का निजी कम्पनीले पाएका छन् । मण्डलले भने, ‘यस खण्डअन्तर्गत पहाड फोर्नुपर्ने काम धेरै छन् । यहाँका अधिकांश काम निजी कम्पनीबाट हुँदै आएका छन् । ठेक्का दिने र रेखदेख गर्ने काम सेनाले गर्छ, केही ठाउँमा सेनाले पनि काम गरिरहेको छ ।’
सरकारबाट पैसा लिने, ठेकेदार छान्ने र निर्माणको रेखदेख गर्ने काम सेनाले गर्छ । निगरानीका लागि सेनाले विभिन्न ठाउँमा क्याम्प खडा गरेको छ । सिस्नेरी क्याम्पमा भेटिएका सेनाका प्राविधिक सुबेदार तुलाराम खड्काले भने, ‘द्रुतमार्गको ट्र्याक खन्ने काम सेनाकै निगरानीमा द्रुत गतिमा भइरहेको छ । हाम्रो क्षेत्रभित्र पनि साढे ९ किमि सडकखण्ड पर्छ । त्यसमध्ये २ किमिको ट्रयाक खोल्ने कामचाहिँ सेनाकै प्राविधिक र निर्माण सामग्रीमार्फत भइरहेको छ । बाँकी पेटीमार्फत निजी ठेकेदार कम्पनीले गर्दै छन् ।’
७६ किमि फास्ट ट्रयाक निर्माणको ठेक्का पाएको नेपाली सेनाले आफ्नै कर्मचारी र निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर २२ किमि मात्रै ट्रयाक खोल्दै छ । ५४ किमि ट्रयाक निजी कम्पनीले खोल्दै छन् । ५४ किमि सडक निर्माणमा निजी २७ र सेनासमेत गरी २८ ठेकेदार परिचालन भएका छन् । ट्र्याक खोल्न खास कति पैसा लाग्ने हो भन्ने निश्चित छैन । सेनाले निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिन्छ र सोबापत सरकारबाट पैसा लिन्छ । सेनाले मागेको पैसा सरकारले निकासा दिन्छ ।
मक्खुबेसीमा ६ किमि, सिस्नेरीमा २ किमि, बुदुनेमा २ किमि, लेनडाँडामा २ किमि र निजगढमा १० किमि ट्र्याक खन्न मात्रै सेना आफैँ संलग्न छ । निजगढमा काम सकिएको छ भने अन्य भागमा भइरहेको छ । सेना आफैँले काम गरेको सिस्नेरी खण्डबाहेक अन्य सबै ठाउँमा तुलनात्मक रूपमा सजिलो छ । निजी ठेकेदार कम्पनीले जिम्मा लिएका अधिकांश खण्डमा चट्टानी पहाड फोड्नुपर्ने भएकाले ट्र्याक खोल्ने काम थप जटिल छ ।
क्याम्प राखेर ठेकेदार परिचालन गर्दै सेना
१. -० देखि ८.७ किमि
-क्याम्प – खोकना
-निर्माण कम्पनी – २
-सूर्य शैलुङ निर्माण कम्पनी
-लामा समानान्तर निर्माण कम्पनी
२. ८.७ देखि १७ किमि
-क्याम्प – मक्खुबेसी
-निर्माण कम्पनी –४
३.१७ देखि २६.५ किमि
-निर्माण कम्पनी – ७
-टुन्डी एन्ड/मानान्तर कन्स्ट्रक्सन
-गजुरमुख/मोतीदान निर्माण कम्पनी
४. २६.५ किमिदेखि ३३ किमि
-सडकको लम्वाई –६.५ किमि
-दिवा निर्माण सेवा
-थोकर निर्माण कम्पनी
-तुन्दु निर्माण कम्पनी
५. चेनएज ३३००० देखि ३८०००
-सडकको लम्बाई –५ किमि
-निर्माण कम्पनी नियुक्त भएको छैन
६. चेनएज ३८००० देखि ४८०००
-सडको लम्वाई –१० किमि
-निर्माण कम्पनी –१
-स्वच्छन्द निर्माण सेवा
काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको लागत ६३ अर्ब बढाउने तयारी